बयलगाडा चढेर आएको गणतन्त्रमा केपी ओलीको धारिलो तरबार - नेपालबहस
बजेटले कोरोना प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप
मुल्लाह ओमरका छोरा याकूब तालिबान समूहको नेतृत्वमा
विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, कलेजले विद्यार्थी….
नेपालमा रोकिएका २३५ यात्रु बोकेर फर्कियो कोरियन एयर
के अब लकडाउनको शैली परिवर्तन हुनु जरुरी छ ?
विकास : समस्या र उदासिनता
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १७९८ पुग्यो
‘संविधानमा दलित समुदायका बालवालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, बजेटमा छैन’
भीम अस्पतालमा उपचारार्थ २५ संक्रमित डिस्चार्ज
गृहपृष्ठ खोज/विशेष बयलगाडा चढेर आएको गणतन्त्रमा केपी ओलीको धारिलो तरबार
बयलगाडा चढेर आएको गणतन्त्रमा केपी ओलीको धारिलो तरबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले दुई महिनाअघि आरोप लगायो – वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको एउटा खुट्टो सधैं विदेशमा रहन्छ । हुन पनि वर्षको झण्डै पाँच महिना त उनले विदेशमै सयर गरेछन् । महत्वपूर्ण निर्णय लिने बेला सधैं कमरेड माधव विदेश यात्रामा रहेकोले समस्या पर्दा यस्तो कुरो आएको होला ।
अर्काे कुरा , ओली सरकार बनेपछि अनावश्यक विदेश यात्रा गर्न नदिने गरी सरकारी अधिकारीलाई कस्ने नीति लिइयो । दुई चार महिना रोकेको जस्तो पनि देखियो । तर अहिले हेर्ने हो भने इतिहासमै नभएको विदेश यात्रा गर्ने सूचीमा ओली र उनको संयन्त्र परेको छ । भोलि विहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन ओलीको टोली दिल्लीको सयर गर्दैछ । दिल्लीबाट फर्के लगत्तै उनी फेरि साताव्यापी युरोप यात्रामा निस्कँदै छन् । भर्खरै मात्र स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको वैठकमा सहभागी भएका ओली निरन्तर विदेश यात्रामा निस्केका छन् । राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिएका ओलीको रुची माधव कमरेड भन्दा कम छैन ।
आन्दोलनकारीले गणतन्त्रको नारा उराल्न थालेपछि ओलीले भनेका थिए– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न । तर बयलगाडा रुपी आन्दोलनले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट मुक्त तुल्याइदियो र त्यसैको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा उनै आसिन छन् । आज तिनै पत्रकारलाई तह लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी कानून निर्माण गर्न सरकार कस्सिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि विदेश सयर गराउन ओली पछि परेका छैनन् । युरोप , अमेरिका होस् वा भारत चीनको यात्रा गराउने उनको अभियानले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन युरोपको अष्ट्रिया भ्रमणमा छन् । निजामती कर्मचारीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । प्राय हरेक दिन मन्त्री, सचिव वा सहसचिवको टोली विदेश सयर गरिरहेका हुन्छन् । यसबाट नेपालले के कति लाभ उठायो , त्यसको तथ्य तथ्याङ्क भने सार्वजनिक भएको छैन ।
दुई तिहाई नजिकको मत पाएर बनेको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले नेपाली जनताको तन र मन छुने कुनै काम गरेको देखिएन । बरु यस अवधिमा ओली सरकारले गरेका काम जनविरोधी र मन दुखाउने धेरै छन् । आजको पूर्ण लोकतन्त्रको ब्याज ओलीलगायत सत्तामा बसेकाले मजाले खान पाएका छन् । देशमा संकट र अफ्ठेरो पर्दा भने पेशागत संघ संगठन सडकमा ओर्लिएको र त्यसैको बलमा लोकतन्त्र पुर्नवहाल भएको यर्थाथ लुकाउन सकिन्न । त्यो अभियानको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको थियो । लोकलाई थाहा भएकै हो – ०५९ माघ १९ पछिको अवस्था । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हत्याएर दलका नेतालाई पन्छाउँदा नेपाली जनताले कस्तो प्रतिक्रिया दिए । ज्ञात भएकै कुरा हो ,सात राजनीतिक दलको आन्दोलन रत्नपार्क केन्द्रित थियो ।
जनताको साथ समर्थन नपाएको राजनीतिक दलको हालत टिठ लाग्दो थियो । जब राजा ज्ञानेन्द्रले पञ्चायती भूत जगाउने गरी मानिस छानेर मन्त्रिमण्डल बनाए , अनि मानिसमा अरुचि बढ्न थाल्यो । यो क्रम अझ कसिलो बनाउने गरी राजामा पलाएको सत्ता भोकले भड्कालोमा जाक्यो । राजा ज्ञानेन्द्रका विश्वासपात्रले सञ्चारमाध्यममा धावा बोलेपछि स्थितिले कोल्टो फे¥यो । पत्रकारको कलम नियन्त्रित गर्ने रहर र भोग जागेपछि ज्ञानेन्द्रको अधोगति सुरु भएको थियो । नेपाली जनताले स्वतन्त्र प्रेसको उपभोग गर्ने स्वाद पाइसकेको थियो । त्यसैलाई कुण्ठित गर्ने ज्ञानेन्द्रको कदम नै दुर्भाग्य बन्न पुग्यो ।
ओली सरकार बैधानिक रुपमा लोकतन्त्र उल्ट्याउन लाग्यो : वरिष्ठ नेता पौडेल
स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोलेपछि पत्रकारहरु सडक आन्दोलनमा ओर्लिए । अनि मात्र राजनीतिक दलको आन्दोलनले गति लिएको हो । पत्रकार जगत सडकमा नआएसम्म राजनीतिक आन्दोलन रत्नपार्कमा सीमित थियो । त्यसैका बलमा उत्कर्षमा पुगेको ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो । र, नेताहरुले गुमेको सत्ता फेरि प्राप्त गरेका हुन् ।
त्यसताका अहिले प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आन्दोलनबारे गरेको टिप्पणी अहिले पनि बेला बेला सामाजिक सञ्जालका भित्तामा शोभायमान हुने गरेका छन् । आन्दोलनकारीले गणतन्त्रको नारा उराल्न थालेपछि ओलीले भनेका थिए– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न । तर बयलगाडा रुपी आन्दोलनले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट मुक्त तुल्याइदियो र त्यसैको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा उनै आसिन छन् । आज तिनै पत्रकारलाई तह लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी कानून निर्माण गर्न सरकार कस्सिएको छ ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध भएपनि ओली सरकार प्रेस विरोधी कानून ल्याइछाड्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टी नेताहरुले विरोध गरेका छन, तर सुनुवाई भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त यो विधेयकमाथि छलफल समेत नगर्ने सोच बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री भने जसरी भएपनि ल्याईछाड्ने अडानमा छन् । यसको प्रभाव कस्तो पर्ला, भोलि अवश्य पनि देखिएला । प्रेस स्वतन्त्रताको हरण गर्ने स्वर र शैली भने भयंकर हो ।
अघिल्लो लेखडिल्लीबजार सदरखोरमा रहेका रेशम चौधरी अस्वस्थ !
अर्को लेखसागमा बजेट अभाव, ७ खेलको मात्रै प्रशिक्षण सुरु
कम्युनिटी, युनिटी र इम्युनिटीका लागि योगाभ्यास उपयोगी : नरेन्द्र मोदी
भारतमा लकडाउनको ५६ औं दिन, संक्रमणको बृद्धिदर उच्च
प्रधानमन्त्री मोदीद्धारा काेराेनाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको प्रसंशा
क्वारेन्टाइनमा बस्न माग गर्दै सप्तरीको हनुमाननगरमा मजदुरले गरे प्रदर्शन
शिक्षा / स्वास्थ्य1448
मेडिकल कलेज / अस्पताल994
विचार / बहस383